China Okpokoro Ogige Ubi Mgba Igwe China Manufacturers & Suppliers & Factory
Okpokoro Ogige Ubi Mgba Igwe - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Okpokoro Ogige Ubi Mgba Igwe)
25 square Square Sochie Post Top niile na One
A na-eme ihe a niile dịka 252 square solar Post n'elu niile na Otu iji rịgoo n'elu ogige dị gburugburu. Okpomọkụ Uhie Square nke 25w dị mma maka onye ọ bụla chọrọ ịchọta mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Nke a pụrụ iche ìhè 25w Square Anyanwụ ejiri ya na SMD LED nke nyere 3750 Lumens na...
25 na mbara igwe nke anyanwụ na-akwado ikpuchi oke ọkụ
Nke a dịka 25hr nke anyanwụ anyanwụ kwadoro ikpochapụ kacha elu . Uhie ìhè anyanwụ Solar 25w dị mma maka onye ọ bụla chọrọ iji dochie gas ma ọ bụ oriọna ọkụ ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Nke a pụrụ iche ìhè 25w square anyanwụ kwadoro ejiri ya na SMD LED nke nyere 3750 Lumens na njuputa zuru ezu. Nke a pụrụ iche 25w...
50w square Solar Post Top All in One
Nke a dịka 502 square Solar Post Top All na One ka a ga-esi na-arịgo n'elu ogwe dị gburugburu. Anyanwụ Square 50w dị mma maka onye ọ bụla chọrọ ịchọta mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Nke a pụrụ iche ìhè 25w Square Anyanwụ ejiri ya na SMD LED nke nyere 3750 Lumens na njuputa zuru ezu. Nke a 50w...
50w square Solar Powered Disc Top Light
Nke a na-eme ka anyanwụ dị okpukpu iri ise na ise nke anyanwụ na -eme ka a na-agbanye ugwu n'elu. Uhie nke anyanwụ 50w nke ìhè anyanwụ dị mma maka onye ọ bụla chọrọ ịchọta mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Nke a pụrụ iche LED 50w square Anyanwụ Kwadoro ejiri ya na SMD LED nke nyere 3750 Lumens...
25w 150lm / w square Solar Garden lamp
Nke a dịka 25w 150lm / w square Ogige ọkụ na-acha ọkụ na -eme ka ọ dị n'elu ugwu. square Solar Garden lamp 150lm / w dị mma maka onye ọ bụla chọrọ iji dochie gas ma ọ bụ oriọna ọkụ ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Nke a dị egwu 25w 150lm / w nke anyanwụ ejiri ya na SMD LED nke nyere 3750 Lumens na njuputa zuru ezu. Nke...
50w 150lm / w square Solar Garden lamp
Nke a dị n'ime 50w 150lm / w square Ogige ọkụ ọkụ dị iche iche na-eme ka ọ dị n'elu ugwu. square 150lm / w Anyanwụ Ogige ọkụ dị mma maka onye ọ bụla chọrọ ịchọta mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Nke a dị iche iche nke 50w 150lm / w n'obosara anyanwụ dị mma na SMD LEDs nke na-enye 3750...
25w 150lm / w square anyanwụ ọkụ
Nke a dịka 252m / w nke a na-eji ọkụ anyanwụ emee ka ọ daba n'elu ogwe dị gburugburu. square 150lm / w Na anyanwụ 25d dị mma maka onye ọ bụla chọrọ ịchọta mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Nke a dịka 1502m / w dịka anyanwụ ejiri ya na SMD LED nke nyere 3750 Lumens na njuputa zuru ezu. Nke a dịka...
50w 150lm / w square Sola Led lamp
Nke a dị n'ime 50w 150lm / w square a na-eme ka ọ dị n'elu ugwu. square 150lm / w Anyanwụ Led 50w dị mma maka onye ọ bụla chọrọ ịchọta mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Nke a dịka 1502m / w nke pụrụ iche na- adabere na ọnụọgụ abụọ SMD nke na-enye 3750 Lumens na njirimara zuru ezu. Nke a pụrụ...
Anyanwụ 25w 150lm / w Square Led lamp
Nke a na-eji anyanwụ 25w 150lm / w Ewube ọkụ na -eme ka ọ dị n'elu ugwu. 150lm / w 25w Square lamp bụ ezigbo maka onye ọ bụla chọrọ ka ọ dochie igwe ma ọ bụ oriọna ọkụ ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Nke a pụrụ iche na- acha ọkụ ọkụ Led lamp 25w 150lm / w ejiri ya na SMD LED nke nyere 3750 Lumens na njuputa zuru ezu....
Anyanwụ 50w 150lm / w Square Led lamp
Nke a na-eme ka anyanwụ 50w 150lm / w dị ka ọkụ na -agbanye n'elu eriri. 150lm / w 50w Square Led lamp dị mma maka onye ọ bụla chọrọ ịchọta mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Nke a pụrụ iche na- acha ọkụ ọkụ ọkụ 50w 150lm / w na SMD Diana nke na-enye 3750 Lumens na njuputa zuru ezu mode. Nke a...
Anyanwụ 25w 150lm / w Square awara oriọna
A na- edozi oriọna dị iche iche nke anyanwụ 25w 150lm / w . Okpokoro anyanwụ 25w 150lm / w Na-acha anyanwụ dị mma maka onye ọ bụla chọrọ iji dochie gas ma ọ bụ oriọna ọkụ ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Nke a pụrụ iche 25w Led Solar150lm / w ejiri ya na SMD LED nke nyere 3750 Lumens na njuputa zuru ezu. Nke a pụrụ iche...
Anyanwụ 50w 150lm / w Square awara oriọna
Nke a na-eme ka ìhè ọkụ 50w 150lm / w na-agbanye n'osisi a na-agbanye n'elu ogwe osisi dị gburugburu 50w 150lm / w Led Solar dị mma maka onye ọ bụla chọrọ ịchọta mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Nke a pụrụ iche 50w Led Solar150lm / w ejiri ya na SMD LED nke nyere 3750 Lumens na njuputa zuru...
Okpokoro Ogige Ubi Mgba Igwe Okpokoro Ogige Uhie Mbara 30w Okpokoro Ogige Ubi Ohu Okpokoro Ogige Uhie Oghere Okpokoro Ogige Ubi Na-ejide Ya Okpokoro Ogige Uhie Ohu 100w Okpokoro Ogige Uhie Osisi 50w Okpokoro Ogige Uhie Ogige Uhie nke 20